Sina: Fijerim-bahiny ny Rantin’i Shanghai · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2010 8:01 GMT
Nandia ny roa volana sahady amin'ny enim-bolana holalovany ny Ranty Manerantanin'i Shanghai . Tsy nipetrapetra-poana ny mpitoraka bilaogy mba hamantatra ny tanjon'ity fandaniam-bola goavana ity, sy hitantara ny fivoarana haingana dia haingana hita amin'ny moron-dalana izay vitsy dia vitsy no tsy tratran'ny fanomanana ity fotoan-dehibe ity. Ny fampirantiana , izay nisokatra ny 1 May ary haharitra hatramin'ny faran'ny volana Oktobra dia heverina ho fotoana fanararaotra ho an'i Shangai hampiderany ireo hareny manoloana izao tontolo izao, ity . Betsaka kokoa ny vola nolanian'i Sina tamin'ny Ranty noho ny tamin'ny lalao Olympika tamin'ny taona 2008 raha jerena ny vola 46 lavitrisa dolara amerikana voaangona sy nolaniana tamin'izy ity . Mpitsidika 70 tapitrisa no tombanana hirohotra amin'ireo tranoeva[lazaina hoe tranoheva izy eto na dia fanorenana mafy aza no nananganana azy] 240 sy ireo fampirantiana nokarakarain'ireo firenena sy fikambanana nandray anjara, miparitaka manodidina ny 2.5 maily [3km] manamorona ny reniranon'i Huangpu any Shanghai. Tamin'ny voalohany, nanodidina ny 200,000 isan'andro ireo olona dia efa mihoatra ny 380,000 isan'andro hahatratrarana ny isa 70 tapitrisa nokatsahina izy ankehitriny, tamin'ny 15 jona aza dia nahatratra 518,000 no tonga nitsidika ka nisy fiandrasana [filaharana] teo amin'ny adiny dimy na fito ora hidirana amin'ny trano eva iray fotsiny .
milahatra hitsidika ny tranoheva Frantsay ireo vahoaka ao amin'ny Ranty. Sary nalain'i Esther Young
‘Tanàna tsara kokoa, fiainana tsara kokoa’ no lohahevitry ny Ranty, hita amin'ireo afisy, ireo takela-by lehibe fametahana afisy, ary ny Haibao ilay biby famantarana izay hita lalandava miparitaka manerana an'i Shanghai. Na izany na tsy izany, anton-dresaka Sinoa mpiserasera amin'izao fotoana izao io teny filamatra io amin'ny fiantraikan'ny fampirantiana eo amin'ny tanàna na tsia, ary amin'ny fomban'ny Han Han somary maneso kely:
Raha tena mitady fanoharana ianao, dia toy ny akanjo vita eto an-toerana izay ankalazaina be sy anaovana dokambarotra fatratra. Toy ny miavaka sy misongadina ianao miakanjo azy avy eo, fa hitanao fa hay izy io marika ambanimbany rehefa mankany ivelan'ny firenena ianao ka manontany ny manodidina .
Nandrenesam-peo ihany koa ny tontolo mihamiroborobon'ny mpitoraka bilaogy vahiny any Sina . Voalohan-daharana amin'izany ny mpanoratra Amerikana mipetraka any Shanghai, Adam Minter, izay nanadihady mikasika an'ity Ranty ity eo amin'ny bilaogy notateriny , Shanghai Scrap, mihoatra ny herintaona. Ny notantarain'i Minter hatramin'ny antsipirihany dia ny resaka fahalalana olona sy ny kolikoly izay mitranga ao ambadimbadika any nikasika nanamboarana ny tranoeva Amerikana manokana.
Ny tranoeva Amerikana, izay mitentina 61 tapitrisa dolara amerikana ny nanamboarana azy. Sarin'i Shanghai Scrap nalain'i Adam Minter
Nanaraka isan'andro ny zava-nitranga sy hitranga ihany koa ireo bilaogy eo an-tanàna toa an-dry Urbanatomy sy ry Shanghaiist toy ny fikafika ampiasain'ireo mpitsidika maika ny hiditra anaty tranoeva ka hatramin'ny fividianana amin'ny aterineto ny pasipaoro ho fahatsiarovana ny Ranty (miaraka amin'ny fahazoandalana rehetra) amin'ny vidiny lafo be 5,880 RMB (840 dolara amerikana). Voamarika ihany koa ny ezaka nataon'ny mpitondra ao Shangai tamin'ny fanatsarana ny endriky ny tanàna manana mponina hatramin'ny 19 tapitrisa : nisokatra ho an'ireo mpandeha tongotra, taorian'ny taona maro nisian'ny fanamboarana, ny lalana manana ny lazany Bund , napetraka amin'ny garan'ny metro tsy mitsahatra ny mivelatra ihany koa ireo fitaovana fizahana entana, nihena be dia be ihany koa ny fiampitàna ivelany faritra voatondro ho amin'izany, anisan'ny fandaharam-potoanan'ny governemanta ihany koa ny fanentanana ny olona tsy hitondra akanjo mandry eny ivelan'ny trano , sy ny fandrarana ny fivarotana antsy mba hitandrovana ny fandriampahalemana.
Na izany aza, niteraka fandravana ireo trano manana ny tantarany eo amin'ny manodidina ity fanadiovana noho ny Ranty ity, izay hitan'i Paul French (nanambara haingana ny alahelony ) tao amin'ny China Rhyming. Rava tanteraka fivarotan-kanina mampiavaka ny lalana Wujiang Lu, izay nahitana efitrano fisakafoanana madinika sy fanaovana mofo baolina nitandahatra nanaraka ny lalankely ka nosoloina orinasam-pisakafoanana tandrefana sy tsena an-trano, tamin'ny volana Febroary.
Wujiang Lu talohan'ny fanapotehana. Sary avy amin'ny Bricoleurbanism.org
Wujiang Lu taorian'ny fanapotehana. Sary avy amin'ny Bricoleurbanism.org
Ny famotehana sy ny famindrana an-katerena, loharanon-korontana tany Sina sady nitondra fery tamin'ny fanamboarana ireo toerana ho an'ny lalao Olaimpikan'i Beijing tamin'ny taona 2008, no nipoaka indray nandritra ny fanomanana ny Ranty. Nanangom-baovao tamin'ny famotehana tanteraka ny endrik'i Dongjiadu, iray amin'ny fokontany tranainy any Shangai, na i Minter na i Sue Anne Tay [miala tsiny amin'ny anarana] mpaka sary ao amin'ny Shanghai Street Stories; ary dia voatantara ihany koa ireo mponina nafindra toerana any amin'ny ala an-tranovaton'i Pudong toerna vaovao ampitan'ny reniranon'i Huangpu. Hoy ny tenin'i Joe Benn, avy amin’ i Guangxi Master,
Tafiditra ho vinan'ny nofinofy ho an'ny Sinoa nozarina hiaina an-tanandehibe haingana dia haingana i Shanghai .
Nampanontany tena ny mpitoraka bilaogy sasany hahalala ny tiana ahatongavana amin'ilay teny somary lany andro hoe Ranty na foara manerantanin'i Shanghai 2010 [naotin'ny mpanao fanitsiana, jentilisa: tamin'ny 1889 ny an'i Paris antony nananganana ny tour Eiffel] . Nanoratra i C. Custer, ao amin'ny bilaogy iraisam-pirenena ChinaGeeks
Nanintona sady mora azo ny hevitr'izany hoe “Foara manerantany ” izany tamin'ny taonjato faha-19, rehefa nampiasaina ho fifanakalozana haitao sy hairaha, ary mbola nanintona izy tamin'ny taonjato faharoapolo satria tsy fahita izany hanao topimaso amin'ny toerana iray ny karazan-kolontsain'ny hafa. Indrisy anefa, tamin'ny taonjato faharoapolo, nanana ny aterineto ho amin'izany isika. Maro ny firenena no manararaotra ilay fotoana ho fampisehoan-kery amin'ny fomba milamina, raha misy ny firenena sasany mamela dia ny fisiany fotsiny. Ny tsy ampy amin'izany dia hoe maninona ny olo-tsotra no maniry ny ho any. Maro ny boky novakiako momba ny ranty izay mety ho vitan'ny vahiny ny manao izany, ary hitako fa toa fanambatambarana haingokaingon-trano tafahoatra no betsaka izay toa miaty dokambarotra ho an'ny karazana fizahan-tany . Inona no antony hilaharako mandritry ny ora maro amin'izany?
Tsy matoky mihitsy ny bilaogy SHLaowai :
Fotoan-dehibe hahazoana vola haingana amina hevitra fitaka tsy misy dikany tohanan'ny orinasa marorantsana ilay Ranty, najoro satria efa nisy izany roa taona lasa izay, ary koa tamin'ny roa taona lasa teo alohan'izay, sy ny teo alohan'izay , sy ny teo alohan'izay, ary ny teo alohan'izay .
Fa mipoitra ihany koa ny fijery tsara . Manoratra ao amin'ny Danwei, ny mpanoratra ao amin'ny bilaogy Chinayouren, i Julen Madariaga izay manamafy fa tsy manam-paharoa ny fotoan-dehiben'ny Ranty izay maneho ny fitomboan-kerin'i Sina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hahazo tombony ihany koa ny mponina eo an-toerana :
Amin'ny fotoana mamparanitra ny tsy fifankahazoana eo amin'ireo kolotsaina dia mety hisy fiantraikany mivaingana ny fotoan-dehibe mampiroborobo ny serasera sy ny fandraisan'anjara noho ny mpijery tsy manao na inona na inona . Ho an'ny maro amin'izy ireo, tena hahafinaritra ny mety hahitana “ireo namana vahiny ” maro hafa nosokajiana araka ny kaontinanta sy araka ny fireneny, toy ny amin'ireo tranobe rehetra ao amin'ny Ranty. Mety ho gaga ireo mpitsidika vahiny rehefa maka sary azy ireo satria tranoeva mandehandeha ihany koa izy ireo . Ho an'ny ankamaroan'ireo Sinoa, tena sarotra ny mandeha mivoaka any ivelan'ny firenena, indrindra any ivelan'ny faritr'i Azia Atsimo Atsinanana. Na dia eo aza ireo hamaron'ireo vahiny mivangongo ao Beijing sy Shanghai, saika mbola vaovao ihany koa ireo olona maro ao amin'ireo tanàna kelin'ireo vahiny, ary tsy mazava mihitsy ireo kolo-tsainy. Ao anatin'ireo fidirana 3 andro napetraka amin'ireo vidiny tena mora, hirohotra ho any Shanghai ireo olona ireo .
Ny tranoeva famantarana an'i Sina ao amin'ny Ranty, izay mitentina 220 tapitrisa dolara Amerikana araka ny voatatitra. Sary nalain'i Christine Tan.
Nanararaotra ny niaro ny fotoan-dehibe ihany koa i Zachary Franklin avy amin'iDeluxZilla izay nandrakotra ny Ranty ho an'ny EU Press Wire Service. Tsy nanaiky ny hevitr'ireo Amerikana namany i Franklin, angamba noho izy nahita ny hevitr'i Minter nanazava ny lafiny ratsy amin'ny tranoeva Amerikana, ka mampatsiahy antsika ny fomba itiavan'ireo olona maro mpitsidika ny tranoeva mitentina 61 tapitrisa dolara amerikana tamin'ny fanamboarana, ka tafiditra ao anatin'izany ireo horonan-tsary mikasika ireo olo-malaza (anisan'izany i Kobe Bryant sy i Magic Johnson) miezaka miresaka amin'ireo mpitsidika amin'ny teny Sinoa:
Tsy miraharaha ny fomba nanamboarana ny tranoeva Amerikana ny Sinoa, ny toerana izay alehan'ny vola na iza no nahazo inona amin'ny fandaharana. Fanavaona ankapoben-javatra izany, nefa ianao tsy nahita haino aman-jery Sinoa iray akory nangataka ny fomba nanamboaran'ny Amerikana ny tranoevany na fa maninona no mitentina 61tapitrisa dolara amerikana izany . (…) Mbola manan-danja kokoa aza, porofo marina sy ampy tsara ireo tsipika lava manoloana ny tranoeva Amerikana fa misy tsy mifandray eo amin'ny zavatra hitako nivoaka mikasika ny tranoeva Amerikana, sy ny zavatra tena mitranga marina eo an-toerana .
Mbola hitohy mandritry ny efa-bolana ity zavatra fotoa-miavaka sy hafahafa mikasika ny fanomezana marika ny firenena izay manafaingana ny fivoaran'i Shanghai ity . Efa nijoro vavolombelona sahady ireo vahiny mikasika ireo fiovana ivelan'ny tontolon'ny ranty , ary ny fomba mety mbola hitohizan'izany mandra-pahatongan'ny 31 Oktobra, aorian'io daty io no ahitan'ireo tranoeva ny fanapotehana izay nijalian'ireo faritra maro efa ela any Shanghai, izay hijanona eo mba ho hita .
Jereo ny bokin'i Adam Minter raha liana ny hitsidika ny Ranty ianao, boky izay ahitanao ny fotoana handehanana any, izay tranoeva tokony jerena ary aiza ny toerana hahitana fidirana maitso mba hialana amin'ny olona maro.